रोचक – Allindiabc
May 11, 2021 adminLeaveaComment on आज सुनको मूल्य बढ्यो कि घट्यो ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ सुनको मूल्य
आज मंगलबार पनि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन ताेलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा […]
May 11, 2021 May 11, 2021 adminLeaveaComment on …..त्यसपछि उनको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर परे चकित !
छिमेकी मुलुक भारतको गुवाहाटीमा एउटा निकै दर्दनाक तथा अनौठो घटना भएको छ । एकजना युवकले मोबाइल चार्ज गर्ने २ फिट लामो चार्जर केवल आफ्नोगोप्य पार्टी भित्र छि’राए । त्यो चार्जर केवल उनको प्राइभेटपार्ट भित्र छि’रेर मु’त्रथै’ली’मा पुग्यो । यौ’न स’न्तु’ष्टि’का ला’गि चा’र्जर केवल छि’राएपछि अ’त्ताल्लि’एका ती युवक र’न्थनिँदै अस्पतालमा पुगे । तर डाक्टरसँग उनले साँचो […]
May 11, 2021 May 11, 2021 adminLeaveaComment on कैला’शमा साक्षत् शिव देख्ने जातिले मनै देखि ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस हुनेछ अदुभूत फलि’फाप
हिन्दूहरुको आराध्यदेव शिवलाई योगका गुरु मानिन्छ । उनी प्रायजसो ध्यान मुद्रामा देखिन्छन् । उनको पूजा लिंगकोरुपमा गरिन्छ । भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्रमय दुवैको लागि विख्यात छन् । सृष्टिको उत्पात, स्थिति एवं संहारको अधिपति शिवलाई मानिन्छ । शिवको अर्थ कल्याणकारी हुन्छ । तर उनी सधै लय एवं प्रलय दुवैलाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्छन् भन्ने […]
May 11, 2021 May 11, 2021 adminLeaveaComment on पाथीभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज मंगलबारको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय हो । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ । मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । […]
May 9, 2021 May 9, 2021 adminLeaveaComment on प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको मु’र्दाघरमा यौ’नध’न्दा
अस्पतालको मु र्दाघ रमा ला श राखिन्छन् । तर, यौ नका भोकाहरुले यो ठाउँलाई पनि शरीरको भोक बनाउने अड्डा बनाए । पछिल्लो समय अस्पतालको मु र्दाघरमा भेटिएका जोडीहरुको तस्वीर बाहिरिएको छ । भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौरमा महाहराजा यशवंतराज अस्पतालका केही फोटो बाहिरिएका छन् । फोटोमा केही युवा र युवतीहरु आधा अधुरा कपडामा देखिएका छन् । […]
पाथिभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज बैशाख २६ गते आईतबारको राशिफल
May 9, 2021 May 9, 2021 adminLeaveaComment on पाथिभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज बैशाख २६ गते आईतबारको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख २६ गते आईतबार इश्वी सन २०२१ मे ९ तारीख बैशाख कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथी रेवती नक्षत्र प्रीती योग गर करण चन्द्रमां मिन राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं बसन्त ऋतु रेडक्रस दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मित्र […]
बिदेशबाट आउनेहरूको लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम
May 8, 2021 adminLeaveaComment on बिदेशबाट आउनेहरूको लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम
काठमाडौं। भारतबाट हवाई मार्ग हुँदै आउनेहरूले अब १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै गत सोमबारदेखि आन्तरिक तथा वैशाख २३ गते बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रियतर्फका सबै उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भारतबाट हप्तामा दुइ वटा उडान गर्नेगरी भएको थियो। सांस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधवार […]
गर्भवती महिलालाई जान्नु पर्ने विशेष कुराहरू
May 8, 2021 May 8, 2021 adminLeaveaComment on गर्भवती महिलालाई जान्नु पर्ने विशेष कुराहरू
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले मानिसहरु पुनः समस्यामा परेका छन् । संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पहिलो कोरोना संक्रमणको लहरमा संक्रमित हुने सम्भावना कम रहेका व्यक्तिहरुमा पनि दोस्रो लहरको संक्रमणमा संक्रमित हुनेको संख्या बढेको छ । नवजात शिशुहरू पनि कोरोना संक्रमित भएका छन् […]
कतार सरकारले दिए १४ नेपाली कै’दीब’न्दीलाई आ’ममा’फी
May 8, 2021 adminLeaveaComment on कतार सरकारले दिए १४ नेपाली कै’दीब’न्दीलाई आ’ममा’फी
काठमाडौं । रमादान पर्वका अवसर पारेर कतार सरकारले १४ नेपाली कै’दीब’न्दीलाई आ’ममा’फी दिएको छ । कतारस्थित केन्द्रीय तथा अन्य का’रागा’रमा विभिन्न आरोपमा स’जा’य भो’गिरहेका उनीहरुलाई आ’ममा’फी दिइएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ आ’ममा’फी पाउनेको विवरण दूतावासले सार्वजनिक गरेको छैन । कतार सरकारले विभिन्न अवसर पारेर त्यहाँस्थित का’रागा’रमा रहेका नेपालीलाई आ’ममा’फी दिँदै आएको छ । दोहास्थित […]
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का सहभागी किरण गजमेर चर्चामा
May 8, 2021 adminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का सहभागी किरण गजमेर चर्चामा